China Factory Bulle Mink Eyelashes Vendor 3D Lashes miaraka amina orinasa tsy miankina eyelashes Box factory sy mpanamboatra | Weiti
Factory Volk Mink Eyelashes Vendor 3D Lashes miaraka amin'ny boaty eyelashes marika manokana
1, volomaso mink DONNA style
2, 14mm kapoka malefaka voajanahary
4, tahiry efa vonona vonona hamidy
√Kalocils 3D mink lashes dia vita amin'ny volo mink tena 100%, latsaka avy amin'ny volo voajanahary voajanahary ary madiovina. Tsy hampijaly biby mihitsy izahay! Ny volomaso mink anay dia hypoallergenic, tsy misy akora simika, aza manimba ny masonao.
√Ireo volomaso mink ireo dia vitan'ny matihanina. Asa lehibe amin'ny kofehy sy kapoka mangirana. Volavola 3D tena izy, manana sosona voajanahary sy kofehy voajanahary tonga lafatra, ny vokany amin'ny makiazy isan-karazany. Volom-borona sy manaitaitra fa voajanahary. Mampamirapiratra sy manintona anao ary manintona anao izany.
√Ireo lava kapoka sandoka ireo dia lava sy matevina, azonao atao ny manamboatra ny halavany arak'izay ilainao. Ny kapoka vita amin'ny mink Arison 3D dia azo ampiasaina indray, azo ampiasaina mihoatra ny in-15 amin'ny toe-javatra mahazatra. Mora ampiharina, tsy mora arotsaka. Tsara ho an'ny matihanina na vao manomboka.
√Maivana sy malefaka ity volomaso sandoka ity, tsy tsapanao akory ny lanjany rehefa mitafy azy ianao. Mahazo aina amin'ny fiainana andavanandro, miasa, na manatrika fety. Hampamirapiratra ny masonao izany. Io koa no safidinao fanomezana mety.
Teo aloha: OEM 3D Eyelashes Mink Lashes vita amin'ny tànana vita amin'ny volom-bolo vita amin'ny volom-borona vita amin'ny tanana
Manaraka: Top Quatity Handmade Factory Strip 3D 14mm Lashes Mink Wholesale Wholesale
boaty volomaso marika manokana
Ambongadiny Wholesale 3D Strip Mink eyelash Manufact ...
Mamorona be dia be ny tananao manokana vita tanana ...
3D Mink eyelashes vita tanana voajanahary hita maso Reusabl ...
3D Mink eyelashes kosmetika ambongadiny Min ...
Ambongadiny marika tsy miankina ambongadiny 100% Herisetra vita amin'ny tanana ...
Ambongadiny marika manokana marika manokana 3D Las ...
Mpivarotra volomaso, Volomaso maso, kapoka mink, eye liner, Fanitarana volomaso, eyeliner,